China Eprinomectin Kugadzira uye Fekitori | Veyong
Molecular fomura: C50H75NO14
Eprinomectin iabamectin inoshandiswa sechiremba wemhuka endectocide. Iko musanganiswa wemakemikari maviri emakemikari, eprinomectin B1a uye B1b. Eprinomectin inoshanda zvakanyanya, yakafara-yakasara, uye yakaderera-masara ezvipfuyo anthelmintic mushonga ndiyo yega yakafara-anthelmintic mushonga unoshandiswa kumombe dzinomwisa mukaka pasina kukosha kwekusiiwa kwemukaka uye pasina chinodiwa chenguva yekuzorora.
Mhedzisiro ye kinetic zvidzidzo zvakaratidza kuti acetylaminoavermectin inogona kumisikidzwa nenzira dzakasiyana siyana, senge yekumuromo kana yekucheka, subcutaneous, uye intramuscular jekiseni, zvine hunyanzvi uye nekukurumidza kugovera mumuviri wese. Nekudaro, kusvika parinhasi, pane maviri chete ezvigadzirwa zvekugadzirira acetylaminoavermectin: kudira mumiririri uye jekiseni. Pakati pavo, kushandiswa kwekudira mumiririri mune mhuka dzinotyisa kuri nyore; nepo kunyangwe iyo bioavailability yejekiseni iri yakakwira, iyo jekiseni saiti kurwadziwa kuri pachena uye kukanganisa kwemhuka kwakakura. Izvo zvakawanikwa kuti kunwiswa nemuromo kwakanyanya kudarika transdermal kunwiwa kwekutonga kwematatu uye arthropods anodya paropa kana mvura yemumuviri.
Fizikikemikari zvimiro zvemushonga chinhu chichena chemukristini chakasimba patembiricha yemukati, ine nzvimbo inonyungudika ye173 ° C uye huwandu hwe1.23 g / cm3. Nekuda kweboka rayo remepilophilic mune yayo mamorekuru mamiriro, ayo lipid solubility akakwirira, inosungunuka mumakemikari anogadziriswa senge methanol, ethanol, propylene glycol, ethyl acetate, nezvimwewo. L), uye inenge isingasviki mumvura. Eprinomectin iri nyore kutora mapolyzeze uye oxidize, uye chinhu chemushonga chinofanira kuchengetedzwa kubva pachiedza uye chengetwa pasi pechando.
Eprinomectin ine yakanaka yekudzora maitiro mukutonga kwemukati uye ectoparasites senge nematode, hookworms, ascaris, helminths, zvipembenene uye zvipuka mumhuka dzakasiyana senge mombe, makwai, ngamera, netsuro. Inonyanya kushandiswa pakurapa gastrointestinal nematodes, kuchenesa mite uye sarcoptic mange mune zvipfuyo.
Eprinomectin jekiseni 1%, Eprinomectin Kudururira-pane Solution 0.5%
Pashure: Closantel Sodium